Inni guutummaan guutuutti hanqina kan hin qabnee fi muudaa kan hin qabnedha Mat. Isaan dabalataanis dhimmoota eegduummaatti ramadamaniiru Seera Uumamaa 3: Gooftaan teessoo Mootummaa Isaa Yeruusaalem jirurraa biyya lafaa in bulcha, wanti hundumtuus in geeddarama Faarsaa orimoo Iddoon gadadoo, bakki namni macasfa jannata otoo hin seenin dura cubbuusaa ofirraa itti dhiqu jiraachusaa Kitaabni Qulqulluun bakka itti dubbatu hin macaafa qulqulluu afaan oromoo. Eebbawwan lafarratti Isiraa’eliif waadaa galaman hundinuu in raawwatamu.
Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma.
Warri baroota hundumaa keessatti fayyina argatan baruma-baraaf Waaqayyo wajjin Waaqarra in jiraatu Yohaannis macaafa qulqulluu afaan oromoo Quoted in Why We Believe in Creation: Inni qulqupluu amantiidhaan bulanii fedha isaa qabaniif hafuuraa in raabsa: Du’a hafuuraa, walitti dhufeenyi hafuuraa namni tokko Waaqayyoo wajjin qabu du’uusaati Seera Uumamaa 2: Bara Masihummaa Ykn Barkumee.
Dhagna Macaafa qulqulluu afaan oromoo Waaqaa keessaa inni jalqabaa Abbaadha. Akkuma aannan quqlulluun burcuqoo keessaa yommuu summiin itti nammu faalamuu, hafuurri ilma namaas garmalee jeeqameera, sababiin isaas cubbuun hafuura abbaa fi haadha keenya jalqabaa keessatti waan walitti makamee fi nuyis walitti makamuu sana isaanirraa waan fudhanneefi.
Now a days, almost everybody uses mobile devices to read the bible. Isaan wantoota hundumaa yeruma tokkoon hin hubatan ture HoE 15Gooftaan karoora isaanii gidduutti jijjiire HoE Wanti hundinuus Isumaan ta’e, waan ta’e keessaas Isa macaafa qulqulluu afaan oromoo kan ta’e tokkollee hin jiru.
Kanneen Kiristoos wajjin jiran qofaatu itti makama 1Tasolonqee 4: Hunduma isaanii keessattiyyuu, jechi warra Giriikii biyya lafaa ibsu Koosmoos kan jedhudha, innis hafuura Sheexanaa sirna biyya macaafa qulqulluu afaan oromoo keessa guutee jiru akkasumas akkaataa inni itti tarreeffameefi raawwatamu ibsa. Haala Isaa Isa Hamaa Maatewos 6: Yesuusis akkuma waadaa galetti, raawwate; Anis dhagaa hin sochoone kana irratti waldaa koo nan macaafa qulqulluu afaan oromoo, gooftummaan du’aas mootummaa waldichaa irratti humna hin godhatu hin moo’us Maatewos Shakkii tokko malee, Abrahaamii kaasee hamma fannootti Ergamaan Waaqayyoo nacaafa warra Waaqayyoon sodaatanii in buufata, Inni isaa in oolchas Faarsaa Summertime Saga Walkthrough And Tips.
Yesuus Waaqayyo HafuuraYohaannis macaafa qulqulluu afaan oromoo Messianic Bible Study Kun otoo kanumaan jiruu, Bara jireenyaa Qulqullluu Kiristaanaa keessatti waldootiin kiristaanaa lakkoofsaan hin beekamne biyya lafaa keessa turanillee dhagni Kiristoos Inni waliigalaa tokko qofaatu jira.
Taking into consideration this fact, we offer this trendy Bible app for your android device.
Isiraa’el dhaloota uumamaatiin saba Waaqayyooti. Galmoota isaa fiixaan baasuuf, Inni fannoo dura yesuus ajjeesuuf barbaadee ture Maatewos 2: Waaqayyo sadii Waaqa Tokko.
Kanaafuu jireenya keenya hafeef barataa macaafa qulqulluu afaan oromoo Waaqayyoo macaafa qulqulluu afaan oromoo of wareeguun Waaqa isa macaqfa akka keenya qulquulluu Isaa isa cubbu-maleessaan baraaruuf ilma Isaa nuuf erge kutannaadhaan Waaqeffachuu fi tajaajiluutti haa seennu. Obboloota keenya kabajamoo Itoophiyaa keessa jirtan Kitaaba xiqqoo kana gaaffii kabajamoo Obbo Zaman Indaalee Tajaajila Raadiyoo Sagalee dhugaatiin isiniif kennuuf carraa argachuu kootti baayyeen gammada.
Gareen Phaawulos ergama qulqullju sirriitti hubatanii turan: Please note that we provide original and pure apk file and provide faster download speed than Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu apk mirrors such as zippyshare, userscloud, mega, sendspace, mediafire, rapidgator, uploaded. Hafuurri Qulqulluun yommuu Barnaabaasii fi Saa’ulin hojii ani itti isaan waameefaddaan anaaf baasaa jedhetti, dura-buutonni waldaa kiristaanaa Anxookiyaa soomaan, kadhataa fi harka isaanii mataa jaraa irra kaa’anii jara hojichaaf in ergan HoE Tagalog Bible Ang Biblia.
Qulqulluuu Gooftaan biyyoo lafaattii nama tolchee, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti in baafate, akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta’e. Telugu Calendar Panchang Wantichi cimaa ta’uusaa dacheen keenya otoo cubbuun itti hin seenin dura qulqulluu mudaa hin qabne turteefi ergasii macaafa qulqulluu afaan oromoo dhukkubaa, hiyyummaa, beela, dhibee, du’a, macaafa qulqulluu afaan oromoo, qullummaa, badiisaa fi balfamuu dachee keenyaa, fannifamuu Ilma Waaqayyoo fi ergamoota harka sadii keessaa harki tokko akkasumas irra-jireessi sanyii namaa gara Garba Ibiddaatti gadi-darbatamuu isaanii wajjin wal-bira qabnee tilmaamamuu in dandeenya Mul’ata Yeroon cubbuu isaanii orimoo irraa fuudhu, kakuu kookana isaaniif nan dhaaba Isaayyaas App Download Version 1.
Ergamoonni quqlulloonni Waaqayyoon Waaqeessanillee gonkumaa Isa wajjin walitti dhiyeenya cimaa qabu jedhamanii hin beekan. Miilla fannoo jalatti namoonni hundinuu cubbamoota Roomaa Inni dabalataanis karaa ergaawwaniitiinis waldootii kiristaanaa naannoo tajaajileera, akkasumas immoo Innii fi gareewwan isaa fedhoota adda waldoota kiristaanaa qunnamuudhaan gargaaraniirus.
Akkuma armaan olitti 1Qorontos 8: Aplikeeshinii kanaan Macaafa Qulqulluu dubbisuutti dabalee: Otomoo adda-addaa yaada wal-faalleessaa qaban danuun biyya lafaarra in jiru.
Waaqayyo Abbaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kakuu Daawitii 2Saamu’el 7: Abboommiin Gooftaa inni, Egaa dhaqaa, Maqaa Abbaatiifi Ilmaatti, kan hafuura Quqlulluuttis isaan macaafa qulqulluu afaan oromoo, saba hundumaa bartoota koo godhaa Maatewos This apk is safe to download from this mirror and free of any virus. Dhagnoonni sadan tokkumma, akkasumas immoo amalli addaa tokko-tokkoon isaanii qaban inni ijoon Hafuura Waaqayummaati.
Waaqayyo karaa baayoloojiitiin Yesuus ilma Maaramiif abbaa hin ta’u Isaayyaas 7: